Oscar López Rivera, Gadra Politika Voatazona Ela Indrindra Tao Puerto Rico, Nahazo Famelan-tsazy Avy Amin’ny Filoha Obama · Global Voices teny Malagasy
Oscar López Rivera, Gadra Politika Voatazona Ela Indrindra Tao Puerto Rico, Nahazo Famelan-tsazy Avy Amin'ny Filoha Obama
Voadika ny 19 Janoary 2017 5:37 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Español, Ελληνικά, Aymara, Português, Deutsch, English
Oscar López Rivera. Sary nivezivezy betsaka tamin'ny alàlan'ny media sosialy.
Nahazo famelan-tsazy avy amin'ny filoha Amerikana Barack Obama i Oscar López Rivera, ilay gadra politika ela indrindra tao Puerto Rico,.
Nivoaka voalohany tao amin'ny media sosialy ny vaovao ny tolakandron'ny 17 Janoary, na dia nanambara aza ny gazety mivoaka isan-kerinandro mpanohana ny fahaleovantena Claridad fa nisy ny loharanom-baovao izay nanamafy fa mbola eo am-pieritreretana ny fanafahana i Obama. Anisan'ireo antsipiriany izay efa nambara hatreto, dia ny hoe tsy eo noho eo ny famotsorana an'i López Rivera. Haharitra mandra-pahatongan'ny 17 May 2017 ny saziny. Tsy misy fepetra ny famotsorana.
Nilaza i López Rivera fa ny fitsidihana ny fianakaviany any Chicago no zavatra voalohany indrindra ho ataony raha vao mivoaka ny fonja izy, fa ny hipetraka ao amin'ny tanàna amorontsiraka any San Sebastián do Pepino,izay toerana nahaterahany any avaratra andrefan'i Puerto Rico, no nokasainy hipetrahany.
Voaheloka ho nanao ” tetika fandrisihana fikomiana” i López Rivera 35 taona sy fito volana lasa izay noho ny fifandraisany tamin'ny Tafika Fahafaham-Pirenena (amin'ny teny Espaniola: Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, na FALN), izay vondrona mitam-piadiana niady ho amin'ny fahaleovantenan'i Puerto Rico avy amin'ny Etazonia nandritra ny taompolo 1970 sy 1980. Nifikitra nilaza hatrany i López Rivera fa tsy meloka tamin'ny famonoana olona na iza na iza izy na nampiasa herisetra. Eny tokoa, tsy nisy porofo akory nampifandray an'i López Rivera tamin'ireo herisetra nataon'ny FALN.
Nanangom-baovao [mg] ireo hetsika miantso fanafahana an'i López Rivera tany am-ponja nandritra ny taona maro hatramin'izao ny Global Voices. Raha vao azo ny fanazavana fanampiny, hampahafantatra anao ny tohin'ity vaovao ity ny Global Voices . Aza miala hanaraka ny antsipiriany bebe kokoa.